iOS 11 ကိုစက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် iPhone နှင့် iPad အတွက်ထုတ်လုပ်မည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
ဟိုဆေး Alfocea | | iOS 11
အက်ပဲလ်၏နွေရာသီအလွန်ရိုးရာသော့ချက်အသစ်ကိုသူပြသခဲ့သော၎င်း၏အဓိကအချက်အချာကျသောအရာသည်အဆုံးသတ်လုနီးပြီ။ နာရီသစ်များ၊ Apple Watch Series3နှင့်စမတ်ဖုန်းအသစ်များ၊ iPhone 8 နှင့် 8 Plus အသစ်များနှင့် iPhone X တို့ကိုပါတွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်း hardware အားလုံးမဟုတ်ပါ။
နွေရာသီပြီးနောက်၊ ကိရိယာအသစ်များအပြင်၎င်းအပါအဝင် operating systems ဗားရှင်းသစ်အတွက်လည်းအချိန်ဖြစ်သည် iOS 11အထူးသဖြင့်အိုင်ပက်ဒ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုသည်ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်သည့်ဗားရှင်းသစ်။ အခုတရားဝင်ကြေငြာမယ့်အချိန်ကိုသိပြီ။
iOS 11 ကိုစက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်လူတိုင်းထံရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်ကျင်းပမည့် World Wide Developer Congress ၂၀၁၇ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် Apple က Apple TV, Apple Watch, Mac ကွန်ပျူတာများနှင့်သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၊ iPhone နှင့် iPad အတွက်နောက်ထပ်လည်ပတ်မည့်စနစ်များကိုပြသခဲ့သည်။
iOS 11 မှ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်နှင့်အမြင့်ဆုံးအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိသည် "ဆွဲယူချပါ"သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းအသစ် မှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ်သင်၏ dock အသစ်အပြင် multitasking လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ၊ ထိန်းချုပ်မှုစင်တာအသစ်နှင့်အခြားများစွာရှိသည်။
ဒါဟာဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည် အထူးသဖြင့်အိုင်ပက်ဒ်အတွက် iOS အတွက်အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းသည် Mac သို့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကစတိဗ်ဂျော့ဘ်စ်ကြေငြာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရခြင်းမရှိသေးသော PC post-era နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာရောက်ရှိစေနိုင်ခဲ့သည်။
ထိုနေ့ရက်မှဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် developer များ၏ပထမဆုံး beta ကို install လုပ်ရန်စွန့်စားခဲ့ကြသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုင်ပက်ပေါ်ရှိ iOS 11developer များဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ။ ပြီးတော့ဇူလိုင်လအစောပိုင်းမှာပထမဆုံးအများပြည်သူသုံး beta ကိုရောက်လာတယ်။
ကျန်တဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက်တော့စောင့်ဆိုင်းမှုအဆုံးသတ်တော့မှာပါ လာမည့်စက်တင်ဘာ ၁၉ တွင် Apple သည် iOS 19 ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိမည် iPhone, iPad နှင့် iPod touch အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iOS 11 ကိုစက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် iPhone နှင့် iPad အတွက်ထုတ်လုပ်မည်
IOS 11 GM ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန်အဆင်သင့် !!!!!
ငါပဲ fix နှင့်နောက်ဆုံးဗားရှင်းရရှိနိုင်ပါသည်လျှင်။ ၁.၉ gb iphone 1,9s တွင်
ငါ PUERTORICO မှယနေ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းရရှိပြီငါ IPHIONE7PLUS ပေါ်တွင်အိုင်တီထည့်သွင်း
စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်မှာစတင်လွှင့်တင်ခဲ့တာကတော့ WatchOS ပဲ။ ဟားဟား။
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် watchOS 19 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး iOS4ကိုလည်းမနေ့ကကတည်းကရရှိနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ Apple ၏အများပြည်သူသုံး beta ပရိုဂရမ်တွင်စာရင်းသွင်းထားသော developer များနှင့်သုံးစွဲသူများအတွက် iOS 11 GM ဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဗားရှင်း (ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လွှတ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောဆိုသောအခါဖြစ်သည်) စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နောက်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် 11:19 pm တွင်စပိန်ကျွန်းဆွယ်အချိန်ကနေရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုယူဆ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
AirPower - ၂၀၁၈ အထိမမြင်နိုင်တဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်
နောက်တစ်ခု - Apple က iPhone X ကိုနောက်ဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်တယ်